Bhala uluvo-kuya kufuneka unike ingqalelo! Ipapernerds
Ukubhala uluvo lwakho kunokukhawuleza kwaye kube lula! Sibonisa indlela.
Ingxelo - Bhala ke	Yenza ngokufanelekileyo!
Unikwe umsebenzi wokwenza enye amagqabantshintshi ukubhala malunga nomsitho, ibali okanye ibango lenzululwazi. Kodwa luthini uluvo phofu? Uluvo aluthethi enye into ngaphandle kwezimvo okanye uluvo. Izimvo ezibhaliweyo zihlala zifuneka kwizifundo zesiNgesi, ngakumbi kwiiklasi ze-Abitur.
Izimvo kufuneka zibonise olwakho uluvo. Ubunzima bokubhala izimvo kukuchaza eyakho imbono kwaye uyiqulunqe ngezivakalisi ezicacileyo nezichaziweyo. Nje ukuba umbono wakho usebenzile, kufanelekile ukuba uchaze iingxoxo zepro kunye nezichasayo. Ukuba oku akwenzeki, amagqabantshintshi aba kwicala elinye, ukuba akunjalo.
Njengalo naliphi na iphepha lobugcisa okanye umsebenzi wobunzululwazi, amagqabantshintshi nawo ahlelwe ngokwepateni ethile. Icandelo elirhabaxa lenziwa kwintshayelelo, icandelo eliphambili nenxalenye yokugqibela. Inxalenye ephambili yezimvo ngokukodwa ilandela imigaqo engqongqo ngokubhekisele kwimpikiswano:
Okokuqala, iimpikiswano ezichaseneyo zidwelisiwe, ukuqala ngeyona mpikiswano inamandla yokuchasana. Elinye emva kwelinye, iimpikiswano ezibuthathaka ezibuthathaka zinikezelwe kwezona mpikiswano zibuthathaka.
Nje ukuba iimpikiswano eziphikisayo zijongiwe, iingxoxo-projekthi zidweliswe kwicandelo elilandelayo. Umyalelo we-pro-arguments uhlukile kuleyo yeempikiswano. Okokuqala, eyona pro-argument ibuthathaka inikezelwe kwaye kuphela ekugqibeleni eyona pro-ngangona yomeleleyo. Ingxoxo eyomeleleyo, eyilelwe ukuxhasa uluvo lwakho, ikhunjulwa ngcono ngumfundi xa ikhankanyiwe esiphelweni.
Ukulandelelana kweempikiswano kubalulekile kuba ngale nto ibizwa ngokuba ngamacala amabini-okokuqala iimpikiswano zokuphikisana, emva koko iimpikiswano- utshintsho olufunekayo kwizimo zengqondo lunokuziswa kubantu ekujoliswe kubo kunokuba kulandelwe umva. Ukuqaqanjiswa kweyona mpikiswano inamandla ekugqibeleni kuye kwaveza imemori. Kule meko, sithetha ngempembelelo "yexesha".
Impikiswano esecaleni enye ikhona ukuba kusetyenziswa i-pro-argument kuphela. Ngolu hlobo lwempikiswano, eyona mpikiswano inamandla ibekwa ekuqaleni ukuze kuqinisekiswe ukuba umfundi okanye umntu ekujoliswe kuye ufumana inqanaba eliphezulu lokuqwalaselwa. Kule meko sithetha ngesiphumo "sobukhulu".
Intshayelelo ikhokelela kwisihloko. Ingxaki iboniswe ngokufutshane nangokufutshane. Isingeniso sele sinokuqulatha esaso ingxelo ngohlobo lwethisisi. Oku kuvusa umdla wokufunda ngokuqinisekileyo. Isiteyitimenti sinokwenziwa ngendlela yombuzo.
Icandelo eliphambili lijongana neempikiswano kunye neempikiswano. Ubume obunikiweyo benza ukuba amagqabantshintshi aqiniseke. Into ebalulekileyo yoyilo kukwahlula amalungu ngamanye. Iimpikiswano zigxininisiwe kwaye zihlala engqondweni yomfundi.
Inxalenye yokugqibela sisishwankathelo soluvo lwakho. Akukho zimpikiswano zintsha okanye iingcinga zongezwa. Iimpikiswano zishwankathelwe, isigqibo senziwe. Kwisivakalisi sokuqukumbela, ithisisi ebhalwe ekuqaleni inokugxininiswa kwakhona. Inqaku lolu gxininiso luya kubonakala kwinto yokuba i-arc yoxinzelelo echazwe ekuqaleni kwengcaciso ifumana isiphelo sayo esigqibeleleyo.
Xa ubhala uluvo, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba akukho zivakalisi zide zenziwe. Izivakalisi ezifutshane ziqinisa iingxelo, oololiwe bengcinga kulula ukuyiqonda kumfundi.
Ukubhala uluvo, umsebenzi wokulungiselela uyafuneka. Kwelinye icala, uphando olucokisekileyo loncwadi luyimfuneko ukuze sikwazi ukuxhasa iingxoxo kunye neempikiswano. Kwelinye icala, kuyavakala ukwenza itafile. Iimpikiswano kunye neempikiswano zingenisiwe kule theyibhile. Inyathelo elilandelayo kukuthoba ubunzima beempikiswano. Amanani afanelekile koku. Inombolo 1 ihlala ichaza ubuthathaka kunye nobubi. Inombolo 2 ichaza ingxoxo elandelayo ebuthathaka, njl njl. Ukuqwalaselwa komfundi okanye umntu ekujoliswe kuye kwehle ngokukhawuleza okukhulu, ngesiphumo sokuba uluvo alusalinganiswanga kakuhle. Iimpikiswano ezi-5 zokuchasa nganye nganye ziye zenzeka kakhulu. Isivakalisi sokugqibela umz. B. qala: "Ngokubhekisele kwinto esele iqalisiwe apha ngasentla, ndinoluvo lokuba ...".
Nokuba ukubhala ingxelo kungumsebenzi oqhelekileyo woviwo kwiklasi yamabanga aphakamileyo ngesiNgesi, lo msebenzi unokuthi ubonwe njengenyathelo lokuqala kumagqabantshintshi obuntatheli. Amagqabantshintshi ahlulelwe kwiifom ezahlukeneyo. Yintoni zonke iifom ezizodwa ezifanayo, nangona kunjalo, kukugxininisa kwizimvo ngokuchaseneyo neengxelo zeendaba.
Amagqabantshintshi eendaba afuna kwaye kufanele ukuba acaphukise. Kwangelo xesha, kufanele ukuba kucace gca ukuba ingxelo yeendaba ibonakalisa uluvo olufanelekileyo. Oku kufuneka kwahlulwe kuluvo lweengcali, oluhlala lupapashwa ngohlobo lwentetho yeendwendwe.
"Bendingazi nokuba ndiqale ngaphi!"